Shot nenyunje muchina Fekitori - China Shot nenyunje muchina Vagadziri, Vatengesi
Pisitoni yemagetsi mweya pombi muchina Mhepo compressor HST-3.2 / 7
Maindasitiri akanyanya kumanikidza mweya compressor inoshandiswa mune pneumatic kukiya, pneumatic chishandiso, tire inflation
ichivhuvhuta maitiro, pfapfaidzo pendi, jecha blasting uye fluidic element.Powerful mhando hombe musoro dhizaini, shandisa zvakanaka
zvakakwana zvinhu. Kusimbisa dhizaini yezvakakosha zvinhu, chiyero cheiyo ruoko
wzvisere zvese kupfuura mamwe mafekitori, chengetedzo yepamusoro, uye yakaderera kumhanya, kunyanya inokodzera basa rinorema
nguva refu inoenderera nekushanda, kunyanya kuvimbika kwepamusoro uye hupenyu hwakareba hwebasa.
Kunyanya kutonhorera kwemweya dhizaini uye kuyerera kwemweya dhizaini, yakadzika yekudzimisa tembiricha, isiri nyore kuisa kabhoni uye kugona kwakanyanya
Kushandiswa kwemavharuvhu akachengetedzwa anovimbisa kuchengetedza kwekushanda.
Chigadzirwa chinowanikwa mu30 & 40 bar kuti ienderane zvese PET bhodhoro kufuridza kweakasiyana madziro ukobvu.
Kuyerera kunoenderana kunoona kugadzirwa kwakachengetedzwa kwemabhodhoro ePET.
Chigadzirwa chakakodzerwa zvakanyanya kuti ushandiswe mumagetsi anoshandiswa nemaoko ePET.
Akapfura nenyunje Machine Rubber Bhandi, Akapfura Blaster Zvikamu
Kuoma (Mahombekombe A) 63 ° C ± 3 ° C
Tensile simba 20.0MPA
Elongation pazororo re500%
Kubvarura simba 68.6KN / M
Iwo akwegura coefficients e (70 ° C / 72H) 0.91
Kubatanidza 48.2-31.36N / CM
Shandiswa pane Track Shot nenyunje Machinery kana Track Sand Sand nenyunje muchina
Hook Type Musoro Rail Kupfura Kunoputika Pasi Pasi Kuchenesa Muchina Q376 Q378 Q3710 Q3720
Q378 Hook mhando Shot nenyunje Machinery
1.The mamiriro bara bara nenyunje kamuri uye marongerwo bara bara nenyunje muchina zvose wakavhomorwa
nekombuta yakabatsirwa dhizaini (CAD), izvo zvinonzwisisika.
2.Iyo yekushandisa mwero weiyo projectiles yakavandudzwa, iyo yekuchenesa mhedzisiro inosimbiswa
uye abrasion kukamuri yekuchengetedza muviri ndiro yakaderedzwa.
3.Iyo cantilever centrifugal blast vhiri turbine (Q034) ne
hukuru hukuru hwenyonganiso uye yakakwira blasting kumhanya inogona
nyatso kuvandudza kugona kwekuchenesa uye uwane hunogutsa hunhu hwekuchenesa.
Crawler Belt Shot nenyunje Machine, Crawler jecha blaster Q324 Q326 Q3210
♦ Ferrous uye isiri-ferrous castings
♦ Kupisa kwakarapwa kukanganwirwa
♦ Zvidiki zvemotokari zvikamu
♦ Kufa kukanda uye zvimwe zvakawanda
♦ Yakaderera kukosha zvikamu zvipingaidzo pakati pechikamu haisi nyaya
♦ Kana kugadzirwa kuchida kuraira kugadziriswa kwematch
♦ Diki kune epakati saizi saizi castings, kunyepa uye kupisa-kurapwa zvikamu
Removal Kubviswa kwejecha kana chikamu chekuchenesa
Kakawanda inverter ye rolls conveyor, blast vhiri, hasha marara system, dijitari control panel,
sarudzo yakasarudzika otomatiki kurodha uye kurodha pasi system, guruva muteresi.
Muchina uyu ndewekuchenesa pamusoro kana kusimbisa kurapwa kweadiki castings, ekugadzira zvikamu muindasitiri yenheyo, chivakwa, kemikari,
mota, chishandiso chishandiso etc.Iyo yakanangana nekuchenesa kwepasi uye nekupwanya kusimbisa pamhando dzakasiyana
diki yekugadzira castings, yekuchengetedza zvikamu uye simbi yekuvaka zvikamu zvekubvisa diki viscous jecha
jecha musimboti uye oxide ganda. Iyo zvakare yakakodzera yekuchenesa kwepamusoro uye kusimbisa pamativi ekurapa kupisa, kunyanya pakuchenesa hushoma, matete madziro zvikamu zvisina kukodzera kukanganisa.
Akapfura nenyunje Machine Zvikamu Points Piritsi / mashizha / hasha
Points piritsi re Shot nenyunje muchina basa revhiri hasha maererano nechimwe chikumbiro kurudyi chakapihwa chipande
inonongedzera mapiritsi ekuvhura kutenderera kamwechete zvakakomba kupfeka uye hasha zvinorova kumagumo kweiyo, blade kusanzwisisika kupfeka,
inoyerera inopesana inochinja haizove nemitemo, yekutarisa nguva nenguva zvinoenderana nezvinodiwa zvekupihwa vhiri vhiri munguva yekupfeka zvakakomba maru “.
Directional seti yekuvhura chinzvimbo sarudza piritsi inoshatisa yakakamurwa shizha chinzvimbo, shandura maitiro pachimiro chechimiro chemuromo chinokanganisa kusiyanisa kwehasha uye saizi yenzvimbo dzinopisa
iri kupararira hasha hasha inoiswa pamusoro penzvimbo, inokonzerwa nekupararira kwehasha pane banga
seti yekugadzika yekumisikidza inogona kuve yakakodzera kune kusakara uye kubvarura pakuvhura kugadziridza. simbiso iyo yakakanda bara kupfutidza muchina musoro basa pasi pekushanda kwenyaya yezvinhu.
Pamberi pemusoro webadza uye hasha yakanangana nekubatana, hunhu hwayo hwakabatana zvakanyanya nekukanda musoro kuita.
pfeka kuramba kwejasi zvakananga kunosarudza hupenyu hwebasa rechipfu uye kupfura nenyunje muchina unomhanya mutengo
kukanda musoro wechipenga kushandisa yakanyanya kupfeka-inodzivisa zvinhu, kupfeka kuramba kwejasi kunze kwechinhu chakabatana neicho chipenga
zvakanyatsoenderana nekushanda mamiriro epfuti nenyunje muchina
Akapfura nenyunje impeller
Direct Shot idzva, rinoshanda blast vhiri, rine runako chitarisiko, chiumbwe chimiro, pasi ruzha
simba rekuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza maficha
MOdel Dhayamita Speed Kupfuura kukuru kupfura Simba